Izifo eziningi zokuphefumula ahambisana ukukhwehlela. Lokhu uphawu kuba ngezinye izikhathi awayiphazamisi kakhulu futhi singathandeki. Ngesikhathi esifanayo umuntu ehlelwa ukungakhululeki ukuthi umane abakwazi ukwenza imisebenzi yabo evamile. Omunye izidakamizwa ezisetshenziselwa nomuthi ukukhwehlela yokuyala "Pulmolor". Imiyalelo, analogs, ukubuyekezwa kuyothiwa ezichazwe kulesi sihloko. Ngemva kokufunda, uzofunda mayelana nezici isicelo zomuthi. Nokho, kufanele kusho ukuthi ngaphambi kokusebenzisa "Pulmolor" imiyalelo ukulungiselela nokubonakaliswa ukusetshenziswa kufanele uzifunde ngokucophelela. Ungakhohlwa mayelana izinto ezifana contraindications engemihle. Futhi, ngaso sonke isikhathi sebenzisa Isikali ecacisiwe zomuthi.
Ngaphambi echaza imithi, kufanele kusho ukuthi ukukhwehlela - kungcono bronchospasm. Usekhulile ezishukumisa ethile. Lesi sici asikho njalo uphawu ezinye egunjini lokuhlolwa kwezifo. Ngokuvamile isifiso ukukhwehlela Imiphumela kusukela ukucasuka we umphimbo noma imuncwe uthuli endleleni. Futhi, abandayo emoyeni ushintsho kuholela reflex efudumele-kuchazwe.
Ngosizo umzimba ivikelwe ukukhwehlela. I bronchi ziya onomfutho futhi zinganakiwe lokucuketfwe ngekwako. Ukukhwehlela kungenzeka ezomile noma ezimanzi. Futhi amajaqamba kukhona elikhiqizayo kuhlinzwa kwambangela izinhlungu nokuwohloka. Ukuze linqume ukwelashwa, qiniseka ukucacisa uhlobo kukhwehlela. Kwenze kungaba onguchwepheshe. Uma uhlangabezana izimpawu, njalo kudokotela futhi uthole aphoyintimenti kwesokudla.
Imiyalelo kanye nencazelo ukulungiselela babike ukuthi izidakamizwa iyatholakala njengoba amaphilisi kanye particulate izinto ngoba kucutshungulwe slurry. Isithako asebenzayo we nomuthi kuyinto ambroxol. Futhi ekulungiseleleni kukhona ithuluzi ezengeziwe ngokuthi loratadine. Umthamo yezingxenye ezimbili incike uhlobo izidakamizwa.
Iphilisi elilodwa ungathola mg 60 ambroxol kanye 5 mg loratadine. Uma uthola ukumiswa ke iqukethe 30 mg owokuqala izidakamizwa yesibili 5 mg. Le mali awe 5 ml isiraphu.
Izimo lapho prescribers
Lapho odokotela batusa ukusetshenziswa Ukwakheka "Pulmolor"? Imiyalelo imibiko isicelo ukuthi izinkomba for ukusetshenziswa kwezidakamizwa kukhona izimo elandelayo:
yezifo yasenhla nemithombo yasenzansi umgudu wokuphefumula;
izilonda amagciwane viral ze- bronchi futhi amaphaphu;
isimo ngemuva kokuhlinzwa;
obstructive ukucinana kwemigudu yokuphefumula nesifo futhi hyperactivity;
rhinitis, sinusitis nezinye izifo nasopharynx, ephelezelwa ukuvuvukala nolwelwesi lwamafinyila kanye nobunzima sokuhlukanisa isikhwehlela.
Ukulungiswa kungenziwa Kunconywa njengoba ithuluzi ezimele noma iphathwe lihambisana namanye izingoma. Ngokuvamile it is kuhlangene antibiotic, izidakamizwa elwa namagciwane namanxusa, kunciphisa ukuvuvukala.
Mayelana "Pulmolor" amaphilisi imfundo manual uthi akufanele isetshenziswe uma hypersensitivity kuya nabavoti. Nokho, lokhu contraindication elikhona zonke imithi. Nge imithi ukunakekelwa okukhulu ebekiwe iziguli isisu izifo emathunjini. Liphinde akukhuthazwa ukusebenzisa imithi uma kwenzeka ukuthi amalungiselelo abandayo esekelwe Codeine zisebenzisa.
On the nokuxhumana echazwe imithi nezinye izidakamizwa kumele ihlolwe nodokotela wakho.
Mayelana Amaphilisi "Pulmolor" imfundo manual ithi izithako ezimbili eziyinhloko asebenzayo. Bakhandwa ethulwa ukunakwa kwakho ngenhla. Basebenzela izidakamizwa based.
Ambroxol has expectorant, anti-inflammatory futhi akuthanjiswanga umphumela. Isikhwehlela ngaphansi ingxenye iba ethambile futhi ngokukhululekile okuhlukana izindonga imithambo emaphashini. Umuthi kuvusa ukukhwehlela. Nokho, aliholeli ukuvimbela. Ngalesi imithi Kusizuzisa phezu ngezimo zesiguli isivele amahora okuqala angu-ngemva kokuphathwa.
Eyesibili ingxenye - kuyinto loratadine. He is an antihistamine. Isenzo yalolu ketshezi kungenxa ukususwa izicubu kusuka ukuvuvukala. Uma spasm ze- bronchi kungenxa ukusabela iguliswa, umuthi ngokuqinisekile ukusiza.
"Pulmolor": yokusetshenziswa izingane kanye nabantu abadala
Ukuze kahle ukukhetha Isikali zomuthi, kudingeka ukuba aye kudokotela. Yodwa a specialist Ungakwazi ukupenda imithi ekufanele futhi anikeze iseluleko ngabanye. Uma labo kungukuthi wathola, udinga ukuthatha imithi ngokulandela imiyalelo. Okushiwoyo isichasiselo?
Kubantu abadala kanye nezingane eziye zaphetha engu-12, ukwakheka inikezwa eyodwa capsule kabili ngosuku. Kulokhu, lesi sidakamizwa kudingeka baphuze amanzi amaningi. uketshezi Enough kuzoqinisekisa dilution esheshayo futhi efanele isikhwehlela.
Ukumiswa inikezwa ikakhulukazi ezinganeni. Nokho, lo isiraphu bangathola kanye nabantu abadala. Kulokhu umthamo 10 namamililitha. It kungenziwa ihlukaniswe kabili ukukhonza uma uthanda. Ezinganeni, lo isiraphu isetshenziswa izikhathi 2.5 namamililitha ezintathu ngosuku.
Ubude besikhathi sokwelashwa kunqunywa ngamunye udokotela, kodwa ngokuvamile hhayi amasonto angaphezu kwamabili. Ukulungisa isiraphu, sebenzisa elicacisiwe imiyalelo yamanzi. Ngaphambi ukusetshenziswa ngamunye, nyakazisa kwengoma.
Kuthiwani ngalo ukwazisa umthengi mayelana imithi "Pulmolor" yokusetshenziswa? Abstract uthi kwamukelekile ukusebenzisa izidakamizwa ekwelapheni kwabesifazane abakhulelwe. Nokho, isinqumo kumele athathwe kuphela nguchwepheshe. Qiniseka ukuthi sicabange ukuthi singakwazi yini imiphumela emibi embungwini futhi inzuzo kumama. Kufanele kuqashelwe ukuthi ukukhwehlela akahlanye eside uma ingelashwa, ingaholela usongo ukukhipha izisu.
Ngokuvamile abathengi ucela ukuthi kungenzeka ukusebenzisa imithi imuncwe "Pulmolor"? Yokusetshenziswa, ochwepheshe zangempela ukubika ukuthi lesi simo senzeka akuyona nokwenzeka. Ukumiswa ayenzelwanga ukusetshenziswa i inhaler anoma yiluphi uhlobo. Umuthi isetshenziswa kuphela izibilini isinyathelo emva ukumuncwa ngokusebenzisa esiswini noma udonga emathunjini.
Izibuyekezo futhi analogue
Uzoba ezaziwayo izidakamizwa "Pulmolor" imfundo manual. Uphenyo abasebenzisi ukubika ukuthi emva eyodwa kuphela ngemva kosuku usebenzisa ukukhwehlela imithi incipha. Uma ngaphambili ibhekene neziqubu babe abakhiqizi, manje phlegm isuka kulula isikhathi ngasinye. Ngemva kwesonto ukusetshenziswa, iziguli yisho ukuba ngcono okukhulu. Kuba lula ukuba sikwazi ukuphefumula, ukukhwehlela okubuhlungu iphenduka ibe elina esithambile.
Ngokuvamile kuhambisane yisisu ekhaleni imikhuhlane. Ngisho kuleli cala uzobe kuchazwe nomuthi ewusizo. Akhipha kusukela ukuvuvukala mucosa acinene futhi ngesivinini ukwehlukana isikhwehlela. abathengi abaningi baye baphawula ukwanda isikhwehlela. Nokho, lokhu kuyinto kusabela okuhle ekwelashweni. Ezinsukwini ezimbalwa nje izimpawu linyamalale. Ngokwezibalo, isikhathi lesi sifo uncipha cishe amabili izikhathi ukulungela kuchazwe.
Naphezu okuqukethwe ingxenye imithi antihistamine, ke akakubangeli mkhuba futhi ukozela. Lokhu kufakazelwa iziguli eziningi. Yingakho imithi ovunyelwe ukusebenzisa, ngisho kwabashayeli abantu bazibandakanya emsebenzini owodwa owenziwe enobungozi.
Odokotela bathi ambroxol isithako ingenye expectorants nephephile. Nokho, kukhona eminye imithi aqukethe ke. Ukuze labo zihlanganisa "Ambrobene", "Lasolvan" nabanye. Kufanele kuqashelwe ukuthi kukhona ingxenye antihistamine kulezi imithi. Yingakho umphumela yabo izoke ezahlukene. Ngaphambi kokuthi usebenzise esikhundleni analogu yasekuqaleni esimisiwe imithi wena, kufanele nakanjani ibuzwe kudokotela. obhekene ngokukhethekile ukuba siye ekwelapheni izingane. Ngakho, ngeke uzivikele izimo ezingalindelekile.
Manje, sabatshela ukuthi yini asetshenziswa amaphilisi "Pulmolor". Yokusetshenziswa nemibono odokotela kumele kuhlolwe ngaphambi kokuba uqale ngokusebenzisa le ekwakhiweni. Expectorant ne isikhwehlela thinning ejenti angathengwa cishe kuzo zonke ekhemisi ngaphandle kadokotela ekhethekile. Ungahlukumezi imithamo kuchazwe.
Wena bakwazi ukufunda ngezici ukusetshenziswa "Pulmolor" izidakamizwa. Imiyalelo kanye analogue, ukubuyekezwa kanye contraindications ethulwa ukunakwa kwakho kulesi sihloko. Uma izidakamizwa kungasizi nawe zingakapheli izinsuku ezingu-7, kuyafaneleka kabusha vakashela udokotela. Ungase udinge ukulungiswa yokwelapha. Uma bephoqeleka ukuba athathe izidakamizwa amasonto engaphezu kwemibili kufanele kwenziwe ngaphansi kokuqondisa kodokotela ngoba ukuhlolwa uma kunesidingo. Mpilonhle! Musa ukukhwehlela!
"Emoksipin" (iso amaconsi), inani contraindications yokusetshenziswa